बिस्तारै विश्वमञ्चमा - मनोरञ्जन - नेपाल
एसियाको प्रतिष्ठित बुसान अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलको एसियन प्रोजेक्ट मार्केटमा यस वर्ष ३ सय ८९ स्क्रिप्टबीच प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसमा छानिएका २२ मध्ये दुइटा नेपालका छन्, विनोद पौडेलको एक्रोन इन्टरनेसनल र राजेश खत्रीको श्यामश्वेत तस्बिर । बुसानमा आउने फिल्म निर्माता, प्रदर्शक र वितरकबाट आफ्नो स्क्रिप्टमा लगानी जुटाउन विनोद र राजेश दक्षिण कोरिया पुगे ।
टोरन्टो अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल संसारकै फिल्ममेकरको 'ड्रिम' हो । यही फेस्टिभलमा आफ्नो सर्ट फिल्म बेयर टि्रज इन द मिस्टको वल्र्ड पि्रमियर गरेर निर्देशक राजन कठेत क्यानडाबाट फर्किए, भदौ अन्तिम साता । टोरन्टोमा स्क्रिनिङ भएसँगै राजनको फिल्म विश्वका अन्य ख्यातिप्राप्त महोत्सवमा चयन हुने पक्कापक्की छ । विदेशी सिनेकर्मीको प्रतिक्रियाले दंग छन् ।
नयाँ फिचर फिल्म चिसो वर्षको अन्तरक्रिया र फन्ड संकलनका लागि मीन भाम विभिन्न देश दौडाहामा छन् । स्क्रिप्ट तयार छ । बहुपति प्रथाको पृष्ठभूमिमा लामा र युवतीको प्रेमकथा बोल्ने यस फिल्मको अनुमानित बजेट ५ करोड रुपैयाँ छ । दीपक रौनियार न्युयोर्कमा छन्, सम्पूर्ण ध्यानचाहिँ मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आफूले बनाउन लागेको पोलिटिकल थि्रलरको तयारीमा खर्चिरहेका छन् । ठूल्ठूला फेस्टिभल र फन्डिङ प्रोजेक्टमा सहभागी हुँदै छन् ।
नेपालमा फिल्म निर्माणको इतिहास ५५ वर्ष पुग्यो । सुरुमा बलिउडको मसलेदार सूत्रबाट प्रताडित भइयो, सारमा अहिलेको दुर्दशा पनि त्यस्तै छ । नेपालभित्रै फिल्मको व्यापार चौपट छ, बर्सेनि करिब सय फिल्म बन्छन् तर जेनतेन आधा दर्जनले मात्र नाफा कमाउँछन्, बहुसंख्यक फिल्मले प्रमोसनको खर्चसमेत उठाउँदैनन् । विभिन्न अनौपचारिक अध्ययनले कुल जनसंख्याको २ देखि ३ प्रतिशत मात्र हल पुग्ने देखाएका छन् । सिनेमा साक्षरता निर्धो छ । 'फिल्म हेर्नु भनेको बिग्रनु हो' भन्ने मनोदशा फेरिएको छैन । देशभित्र सिनेमाले सानदार उपस्थिति जनाउन सकेको छैन भने विश्व सिनेमञ्चमा हाम्रो हालत के होला ? के सिनेमाको दायरा नेपाल र नेपालीभाषीमाझ मात्र हो त ? सिनेमाको दृश्यभाषा विश्वव्यापी हुन्छ ।
तीतो सत्य हो, आधा शताब्दीको इतिहास बनाइसक्दा पनि संसारमा हाम्रो सिनेमाको स्वतन्त्र अस्तित्व निर्माण हुन सकेन । न त मौलिक कथा, पात्र, परिवेश र शैली नै पस्कन सक्यौँ । तर अवस्था केही बदलिएको छ । सुरुआतै सही, हाम्रा सिनेमा संसारका प्रतिष्ठित फेस्टिभलमा छानिन थालेका छन्, लगानीकर्ताको चासो बढेको छ, फिल्मकर्मीले 'एक्स्पोजर' पाइरहेका छन् । माथिका उदाहरणले त्यस्तै ठूलो सपना देखेर सोहीअनुरुपको संघर्ष गरिरहेका फिल्मकर्मीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जो नेपाल र नेपाली डायस्पोराभन्दा माथि उठेर मौलिक सिनेमालाई कलात्मक ढंगले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै छन्, व्यापार विस्तार गर्दै छन् ।
यो उज्यालो अभियानको एउटा दरिलो खम्बा हुन्, मीन । ओस्कार इन्टरनेसनल फिल्म कलेज पढेका मीनले सर्ट फिल्म बाँसुल्लीबाट बाहिरी दुनियाँमा आशाको दियो बालेका थिए । भेनिस अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलको होराइजन सर्ट फिल्म सेक्सनमा छानिएको थियो, यस फिल्म । मीन भन्छन्, "कलाको बजार फराकिलो छ । मन लागेको कथा इमानदार भएर भनियो भने बजारको चिन्ता गर्नु पर्दैन । संसारभर आफ्नो सिनेमा देखाउन सकिन्छ ।" मीन आफैँ यसको प्रमाण हुन् ।
बाँसुल्लीपछि मीनले कालो पोथी बनाए । उनको करिअर मात्र होइन, नेपाली फिल्मवृत्तकै लागि यो 'कालो हिरा' झैँ भयो । ३ करोड ४५ लाखमा बनेको यस फिल्ममा फ्रेन्च सरकार, बर्लिन फेस्टिभल र स्वीस सरकारको ८० प्रतिशत लगानी थियो भने नेपाली निर्माताको २० प्रतिशत । फिल्ममा माओवादी विद्रोहका दौरान कथित तल्लो र उपल्लो जातका दुई बच्चाको मित्रताको कारुणिक कथा भनिएको थियो । भेनिस फेस्टिभलमा क्रिटिक्स विकको विजेता मात्र बनेन, पाराग्वेको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा स्पेसल मेन्सनमा पर्‍यो, बुसानमा स्क्रिनिङ भयो अनि अन्य नब्बे फेस्टिभलमा सहभागी । युरोप, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा सार्वजनिक प्रदर्शन भयो भने अझ कति देशमा यसको प्रदर्शन अधिकार बिक्री भइरहेको छ । नयाँ फिल्म चिसो वर्षका लागि कान्स र लोकार्नोमा फन्ड जितिसकेका छन् ।
मीनजस्तै सफलता चुमेका अर्का फिल्मकर्मी हुन्, दीपक रौनियार । उनका सर्ट फिल्म थ्रेसहोल्ड कान्सको सर्ट कर्नरमा पुगेको थियो । फिचर फिल्म हाइवे बर्लिनमा पि्रमियर भयो, उत्कृष्ट फिचर फिल्ममा नोमिनेसन पर्‍यो । सेतो सूर्यको उपलब्धि अझ उल्लेखनीय छ । भेनिसमा इन्टरफिल्म अवार्ड चुम्यो, टोरेन्टो फेस्टिभलमा पिपुल्स च्वाइस अवार्डमा मनोनयनमा पर्‍यो, प्लाम स्पि्रङ अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलमा न्यु भिजन ग्रान्ड जुरी पुरस्कार जित्यो भने लोकार्नो, सिड्नी र बुसानजस्ता प्रतिष्ठित फेस्टिभलमा आधिकारिक चयन भयो । त्यसपछि न्युयोर्क टाइम्सले संसारका उत्कृष्ट ९ नवनिर्देशकको सूचीमा दीपकलाई राख्यो ।
हाइवे र सेतो सूर्य दर्जनौँ देशमा सार्वजनिक प्रदर्शन भए । कति मुलुकमा राइट बिक्री जारी छ । मीन र दीपकको यहाँ विशेष चर्चा किन गरिएको हो भने विश्व सिनेमञ्चमा नेपाली सिनेमाको पहिचान बनाउन मात्र होइन, नयाँ प्रतिभाशाली फिल्मकर्मीलाई सपना देखाउन र प्रोत्साहित गर्न पनि उनीहरुको गहकिलो योगदान छ । लेखक-निर्देशक राजन कठेत भन्छन्, "मीन र दीपक दाइको सफलताले हामीजस्ता युवा पुस्तामा उत्साह सञ्चार भएको छ । फेस्टिभल र फन्ड प्रोजेक्टमा सहभागीको लहर छाउनुमा उहाँहरुको भूमिका छ ।"
हो पनि, जसरी लुटले आन्तरिक बजारलाई बढावा दिएको थियो, त्यसैगरी मीन र दीपकका फिल्मले विदेशी बजारको ढोका खोलेका छन् । सँगै विश्वमञ्चमा हामी हाम्रो कथा शक्तिशाली ढंगले भन्ने तहमा पुगेको संकेत गरेको छ । बिर्सन नहुने अर्को तथ्यचाहिँ मीन र दीपकभन्दा पहिल्यै विदेशी फेस्टिभलमा नेपालले सहभागिता जनाइसकेको थियो, त्यो पनि डेढ दशकअगावै । ती फिल्मकर्मी हुन्, नवीन सुब्बा र छिरिङरितार शेर्पा । सन् १९९६ मा नवीन निर्देशित खांग्री इटालीको ट्रयान्टो फिल्म फेस्टिभलमा स्पेसल मेन्सनका साथै अमेरिकाको ट्रेलरोइट र अस्टि्रयाको गाँज अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलमा चयन भएको थियो । इटालीको अर्काइभ र होम भिडियोमा समेत बिक्री भयो । सन् २००० मा छिरिङरितारको मुकुन्डो टोकियो, फुकुओका र अमेरिकाको गोल्डन गेट फिल्म फेस्टिभलमा छानियो ।
लगत्तै नवीनको नुमाफुङले अर्को इँटा थप्यो । लिम्बू समुदायको सुनौली-रुपौली प्रथामाथि बनाइएको यस फिल्म फिनिस आदिवासी फिल्म महोत्सवका साथै फुकुओका, गोटेवर्ग र सन्फ्रान्सिस्कोजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलमा पुग्यो । फ्रान्सको भिजुअल फिल्म फेस्टिभलमा पब्लिक च्वाइस अवार्ड जित्यो । यसलाई स्वीट्जरल्यान्डको टि्रगन फिल्मले वितरण गरेको थियो । नवीनका अनुसार विदेशी कम्पनीले नेपाली फिल्मको आधिकारिक वितरण गरेको पहिलो अवसर सम्भवतः त्यही हो ।
विदेशी फेस्टिभलमा गएर मात्र खांग्री, मुकुन्डो र नुमाफुङ हाम्रा लागि कालजयी भएका होइनन् । यिनले बम्बैया शैली र संरचनाविरुद्ध 'विद्रोह' गरेर मौलिकता आत्मसात् गर्नुचाहिँ विशेष थियो । तर विडम्बना ! न यी फिल्मले नेपालका हलमा कमाइ गरे, न त त्यसपछि यसको 'लिगेसी' ले निरन्तरता पायो । खांग्री हलमा चल्दै चलेन, मुकुन्डो हिरारत्न सिनेमाघरमा सीमित भयो । नवीन र छिरिङरितारले समेत सोही रुपरेखाका फिल्म निर्माणलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । फलतः त्यसपछिको झन्डै १५ वर्ष नेपाली फिक्सन फिल्मले विदेशमा गर्वलायक उपलब्धि हासिल गरेनन् । एकै पटक सन् २०१२ मा सुवर्ण थापाको सुनगाभा मोन्टि्रयल, हम्बर्ग, प्लाम स्पि्रङजस्ता फेस्टिभलमा पुग्यो ।
नवीन र छिरिङरितारको आफ्नै कथा छ । मुकुन्डोलाई जापानको एनएचके टेलिभिजनले फन्डिङ गरेको थियो, त्यसपछिको प्रोजेक्टमा विदेशी फन्ड हात लागेन । छिरिङरितार भन्छन्, "मुकुन्डोको पाँच वर्षपछि कर्मा बनाएँ तर नेपालमा रिलिज भएन । मुस्ताङको भाषामा बनेकाले वितरकले बेवास्ता गरे । एक-दुई फेस्टिभलमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।"
नवीनचाहिँ 'एक्टिभिजम' तिर लागे । भन्छन्, "एक-दुई जनाले मात्र केही गर्न नसकिँदो रहेछ । त्यसैले फिल्म नीति सुधार्न मौलिकताको पैरवीमा लागेँ । फिल्ममेकिङमा अल्मलिएँ ।" नवीनले केही समयपछि गुडबाई काठमाडौँ बनाए तर त्यत्तिकै थन्कियो । बल्ल अघिल्लो वर्ष बुसानमा गयो ।
छिरिङरितारले उमा बनाए पनि नेपालमा मात्र रिलिज गरे । बरु कालो पोथी र सेतो सूर्यको कार्यकारी निर्माता बने । नुमाफुङपछि जस्तै सुस्तता छाउला भन्ने चिन्ता छ, उनलाई । भन्छन्, "मौलिक र कलात्मक सिनेमा निर्माणले तीव्रता पाएन, विदेशी बजार र फेस्टिभलमा सहभागिता जनाएन भने हामी फेरि पछाडि धकेलिने छौँ ।"
यो चिन्ता जायज हो तर तत्कालका लागि सकारात्मक संकेत देखापरिरहेका छन् । जस्तोः मीन र दीपक नै फिल्म बनाउँदै छन् । सर्ट फिल्म दद्या भेनिस, सनडान्स र टोरन्टो फेस्टिभलमा छनोट भएपछि पूजा गुरुङ र विभूषण बस्नेत फिचर फिल्म बनाउँदै छन्, द होल टाइमर्स । जेरुसेलम अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म ल्याबअन्तर्गत बनेको यस फिल्म क्यान्स सिनेफाउन्डेसन र लोकार्नो ओपन डुअर्स ल्याबमा चयन भएको छ भने सीएनसी प्रोडक्सन फन्ड र हर्बट बल्स फन्ड पाएको छ ।
विनोद पौडेलको एक्रोन इन्टरनेसनल र राजेश खत्रीको श्यामश्वेत तस्बिरलाई पनि यही लहरमा राख्न सकिन्छ । मीनसँग कालो पोथी लेखेका अविनाशविक्रम शाह झ्यालिन्चाको तयारीमा छन् । आरके पोखरेलले भुटानी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर बनाएको द रेड फालस बुसान र बर्लिनमा गएको छ । उनकै लगानीको ह्वेयर इज द स्टोरी कान्सको सर्ट फिल्म कर्नरमा पुगेको थियो । तर सरकारी अनुदान र अन्य सहयोगबिना व्यक्तिगत तबरबाट मात्र नेपाली सिनेमाले विश्वमञ्चमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसक्ने फिल्मकर्मीको भनाइ छ ।
निर्देशकको ध्यान फन्ड जुटाउनेतिर मात्र भएपछि सिर्जनशीलतामा ह्रास आउँछ, अनावश्यक समय खर्च हुन्छ । दीपक भन्छन्, "कम्तीमा पटकथा लेखनका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने हो भने राहत हुन्थ्यो तर विकास शुल्कबाट टन्न पैसा असुले पनि गुणस्तरीय सिनेमा बनाउन राज्यले पूरै बेवास्ता गरेको छ ।"
छिमेकी भारत र चीन मात्र होइन, ताइवान, दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा पनि आर्टहाउस फिल्मका लागि राज्यले ठूलो रकम अनुदान दिन्छ । सरकारको संग्लनता भएपछि विदेशी फेस्टिभलले पनि प्राथमिकतामा राख्छन् । गिनेचुनेका फेस्टिभल वा अवार्डमा फिल्म चयन भएपछि फिल्मकर्मी जाने, बस्ने र र्फकने खर्च सरकारले नै बेहोर्छ, जसले वितरक, प्रदर्शक र लगानीकर्तासँग फिल्मकर्मीको सम्पर्क बढाउँछ । भोलि बजार विस्तार गर्न सहज हुन्छ । तर नेपालमा न पटकथा लेखनमा सरकारको साथ छ, न त फेस्टिभल जान ।
राजन कठेतको बेयर टि्रज इन द मिस्ट टोरन्टोमा पि्रमियर हुने भयो तर उनले कतैबाट सहयोग पाएनन् । अन्त्यमा आफ्नै खर्चले क्यानडा गएर फर्किए । त्यहाँ बस्ने बन्दोबस्तचाहिँ नेपाली समुदायले गरिदियो । कठेत भन्छन्, "मजस्तै छानिने अन्य देशका निर्देशक सरकारी खर्चमा फेस्टिभल आएका थिए, मैलेचाहिँ व्यक्तिगत खर्चमा जानुपर्‍यो । बडो सकस हुँदो रहेछ ।" एकातिर पैसाको चिन्ता, अर्कातिर उक्त फेस्टिभलमा आएका सिनेमा हेरेपछि राजनले चाल पाए, हाम्रो कथावाचनको असली औकात । भन्छन्, "हामी देखिने सामाजिक कथा मात्र भनिरहेका छौँ, त्यसमाथि कथावाचन सतही र निर्बल छ । तर दुनियाँ व्यक्तिको अन्तरद्वन्द्व र पहिचानको संकटमाथि फिल्म बनाइरहेको छ । त्यहाँसम्म पुग्न हामीलाई अझ समय लाग्छ ।"
सरकारको लगानीजस्तै हामीकहाँ फिल्म बुझेका निर्माताको उस्तै अभाव छ । अहिलेसम्म निर्देशकले नै निर्माताको काम गरिरहेका छन् । जसको असर पनि फिल्मको गुणस्तरमा पर्छ । नवीन सुब्बा भन्छन्, "सबै निर्देशक बन्न खोज्छन् तर निर्माता छैनन् । जबकि निर्माता बलिया भए भने फेस्टिभल र फन्डिङ एजेन्टमा पुर्‍याउँछन् । हामीकहाँ त्यो लेभलमा काम भएको छैन ।" यही कारण हुनुपर्छ, बुसान र भेनिसबाहेक अन्य फेस्टिभलमा नेपाली फिल्मकर्मीले दर्बिलो नेटवर्क सिर्जना गर्न सकेका छैनन् ।
हाम्रा फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको 'एकेडेमिक डिस्कोर्स' पनि खासै हुन्न । त्यसमाथि विदेशी बजार र फेस्टिभल लक्षित गर्ने फिल्मकर्मीमा एउटा घातक प्रवृत्ति देखा पर्दैछ, बाहिरी मुलुकले नेपाललाई जुन ढंगले हेर्न चाहन्छन्, त्यही तरिकाले देखाउने । "बाहिर त जानुपर्छ, त्योभन्दा महत्वपूर्णचाहिँ आर्टहाउस सिनेमा यहीँ बन्नुपर्छ, यहाँ पनि हेरिनुपर्छ । तब मात्र टिकाउ हुन्छ," अविनाशविक्रम शाह भन्छन्, "फिल्मकर्मीमा विदेशी फेस्टिभल होइन, मेरो समाजमा प्रभावकारी हुने कथा कलात्मक ढंगले भन्छु भन्ने लोभ हुनुपर्छ । विदेशीलाई जस्तो मन पर्छ, त्यस्तै बनाउने होड हुनुहुन्न ।"
ट्याग: फिल्ममीन भाम कालो पोथी